Isitudiyo seSurf seNqanaba esezantsi - I-Airbnb
Isitudiyo seSurf seNqanaba esezantsi
Jeffreys Bay, Eastern Cape, eMzantsi Afrika
Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle yonke sinombuki zindwendwe onguRoche & Vicky
URoche & Vicky yi-Superhost
Zanamhlanje kwaye zikhululekile! Phantse eLwandle! (I-200m ukusuka kwiilwandle ezikuDidi lweHlabathi lokuSurfing!) IVeranda yoLonwabo yaBucala eneDay Bed kunye neBarbecue. Eyakho iSefa eluphahleni Jonga phandle! ITV yeCable epheleleyo kunye ne-WIFI yasimahla!
IStudio Apartment incanyathiselwe kwikhaya lethu kodwa izinzile ngokupheleleyo ngokungena kwayo. Ibandakanya igumbi lokulala eli-1 kunye neBhedi yobungakanani beKumkanikazi kunye nesofa yesofa (ibhedi eyi-3quarter). Ikhitshi lincinci kwaye lihambelana nazo zonke izinto eziyimfuneko. Yonwabela iBathroom eneWalk in Shower, Indlu yangasese kunye nezitya zakhe. Ibhonasi 1- IVeranda enkulu yaBucala yaNgaphandle enebhedi yoSuku kunye neBarbecue!
Ibhonasi 2- Ujongo phezu kophahla lweSupertubes, iiThubhu kunye neNqaku.
4.96 · Izimvo eziyi-139
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi139
Sibekwe kwenye yezona ndawo zifunwa kakhulu zokuhlala eJeffreys Bay. Kufuphi noLwandle, ipaki kunye nokuthenga
Umbuki zindwendwe ngu- Roche & Vicky
We are a clean-cut Adventurous family with a love and passion for People, Surfing and Offroad Motorcycling! We have a 16 yr old son (Reece) and 3 small dogs that complete our family!
Singeneka kakhulu kwaye singathanda ukuncedisa kuyo nayiphi na imibuzo! URoche uyonwabile ukunika iingcebiso kwiSurfing kwaye akubonise amabala xa ekhona! Ukwafumaneka nakwizifundo zokusefa. Iibhodi zokusefa kunye neesuti zokumanzisa nazo ziyafumaneka ukuze ziqeshwe kwisiza. Singaphakathi & malunga nedolophu rhoqo ngoko uzive ukhululekile ukukhwela!
Singeneka kakhulu kwaye singathanda ukuncedisa kuyo nayiphi na imibuzo! URoche uyonwabile ukunika iingcebiso kwiSurfing kwaye akubonise amabala xa ekhona! Ukwafumaneka nakwizifundo…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Jeffreys Bay